हाम्रो नेपाल मा : HAMRO NEPAL MA: 2012
अब फेरी झै झगडा लडाईं नगर्नु, म फेरी आउनेवाला छैन सल्टाउन..
तर अब कसरी पो ट्याम पास गर्ने होला ?
लौ मनिषा कोइरालाले डिभोर्स गरिन अरे
लौ मनिषा कोइरालाले पारपाचुके यानी कि डिभोर्स गरिन अरे... ठीक गर्यौ मनिषा... तिमीलाई मेरो पनि समर्थन छ... तिम्लाई मैले त्यो जुत्ता बेच्ने ट्वाकेसँग बिहे नगर भनेकै त थिए नि.. अनी के छ त तिम्रो बिचार मेरो बारेमा.. ईलु ईलु ईलु ईलु
आहा कस्तो राम्रो काम...
नेपाली सेनाका भुपु जवान रामकृष्ण महर्जनले मच्छे गाउँमा पाखो जग्गा भाडामा लिएर ओर्गानिक खेती गरेका छन... उनी शान्ति सेना मा बिदेश पनि पुगेर आईसकेका छन... तर उनी काम गर्न मन भये बिदेश किन जानुपर्‍यो र भन्छन... उनले देशमै तरकारी फलाएर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन.. तेती मात्र हैन टी यू मा पढने एक जना बेरोजगार युवा लगायत थुप्रै गाउँलेलाई रोजगारी पनि दिएका छन.. आहा कस्तो राम्रो काम.. हाम्ले पनि केही सिक्ने कि ?
Labels: entrepreneurship in nepal
ए प्रबिण गिरी पनि मरेछन
ए प्रबिण गिरी पनि मरेछन... कोपुन्डोलबाट समाचार भन्न हिडेको देखिरहन्थे... कुनै जमाना मा म थापाथली को डन भाको बेला... लौ मेरो पनि नम्बर आउँदैछ जस्तो छ् गाठे
Labels: Media Trends in Nepal
समाचारको सिर्शक देखेरै पनि हासो लाग्छ
अचेल त समाचारको सिर्शक देखेरै पनि हासो लाग्छ...के भैराको छ देशमा... अनि के लेख्छन यी पत्रीकाहरु?... हाहाहा
Labels: Media Trends in Nepal, Political and Social Corruption in Nepal
नाक थेप्चिनी र नाक चुच्चिनीका कुरा
खाजा खाँदै थिए.. दुई विवाहित केटीहरु अघी आएर बसे.. एउटी नाक थेप्चिनी थिइन अर्की नाक चुच्चिनी.. दुबै लगभग एकै उमेरका थि..ए दुबैले झन्डै उस्तै पहिरन हरियो रङ्को लगाएका थिए.. फोटो तिनै युवतिहरुको हो
शायद मेरो दिमाग अली बढी नै राजनीतिबाट प्रभावित छ क्यारे.. अचेल म पैला खाने गरेको लिम्बुनी दिदिको पसलमा जाने गरेको छैन.. जेठ १४ को सेरोफेरोमा भएको जातिय कोकोहोलो पछी ति ताप्लेजुङ्की लिम्बुनी दिदी मेरो चुचो नाक प्रती सशन्कित भये जस्तो लाग्यो.. पैले निस्फ्रिकी साथ भाई, तिमी भन्ने मान्छे तपाईं भन्न थालिन.. म सँग अप्ठेरो माने जस्तो गरिन.. मलाई पनि अप्ठेरो लाग्यो अनी म उनको मा जादिन अचेल
तेसैले नाक थेप्चिनी र नाक चुच्चिनीको मेल देखेर एकदमै रमाइलो लाग्यो.. उनिहरु आफ्नै सुरमा गफ गरिरहेका थिए.. गफ राजनीतिक नभयी झट्ट सुन्दा दैनिक जीवन को जस्तो लागेता पनि समाजशास्त्रका अध्यताहरुलाई पनि रुची लाग्ने खालका थिए
उनिहरु नेपाली समाजमा कामकाजी महिला हुनुको अप्ठेराबारे गफिरहेका थिए.. नाक चुच्चिनी चाँही कुनै तीन तारे होटेलमा काम गर्दी रहिछिन.. कहिले काही अफिसबाट फर्किदा रात पनि पर्दो रहेछ.. छर छिमेकले कुरा काटेर गाह्रो छ भन्दै थियिन
नाक थेप्चिनीको पनि तेस्तै समस्या र छ.. घर फर्किदा ढिला हुने सासु ससुराले पनि शन्का गर्छन् भन्दै थियिन.. मेरै सहकर्मीले पनि एक दिन भनिन- ओहो, आज ढिला भैसक्यो मलाई मार्छन अब.. त्यस्तो रात बिरात गर्नु पर्ने के काम छ भन्छन अरे.. म जब मानिसहरुको यस्तो समस्या सुन्छु म सोच्छु कती सुखी छु म.. आफ्नो ब्यक्तिगत सन्चो बिसन्चो बाहेक मलाई कुनै समस्या छैन
अचेल महिलाहरुले पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने फेशन चलेको छ.. त्यसको अर्थ के भने महिलाले घर को काममा मात्र सिमित नभयी आय आर्जन को काममा पनि लाग्नुपर्छ भनिन्छ.. तर के आय आर्जन मा लागेका महिलाहरु साचै सुखी र स्वतन्त्र छन त ? के उनिहरु झनै बढी परतन्त्रमा जकडिन त पुगेका छैनन ?
नत्र भने घर परिवार कै काम अफिस काम भन्दा बढी कठिन हुन्छ.. जस्तो कि सपना प्रधानले पनि भनिन ग्रिहीणी हुनु मात्रै पनि फुल टाइम जब हो नि.. अझ त्यो भन्दा पनि बढी.. घरको पनि काम गर बच्चा पनि हुर्काउ अफिसको पनि काम गर.. फेरी अचेल मानिसहरु सँग काम लिन दिन कस्तो गार्हो छ् सबैलाई.. अत्यन्त स्थिर मनोदशाहुनेहरुलाई समेत आच्छु आच्छु पर्छ.. तेसमाथी त महिलाहरु स्वभावैले अली बढी सम्बेदनशील हुन्छन.. तेसमाथी हाम्रो सामाजिक सन्स्कार एस्तो झन्झटिलो छ
फेरी तपाई भन्नुहोला.. ब्लगमा त खुबै आदर्शबादी बनेर खोक्छस.. मेरो एउटा क्याम्पसको साथीले पनि भन्ने गर्थ्यो ..हावाले जाँड खाको बेला मलाई एसको कुरा सुन्न एकदम मजा लाग्छ.. तर म अहिले जाँड नखाएरै खोकिरहेको छु मित्र.. मेरो वारीपरिका मानिसहरु दुखी हुँदा त्यसको प्रभाव आखिर मलाई पनि त पर्छ नि.. तेसैले म बारम्बार भन्ने गर्छु यो मेरो खोक्रो आदर्श मात्र होइन यो मेरो पनि समस्या हो
कसैको पनि चरित्रमा शन्का नगरौ.. तेसैगरी कसैले पनि चरित्रमा सन्का गर्‍यो भन्दैमा तनाव नलिउ.. चरित्र भनेको समाज निर्मित मान्यता हो जो समय सँङै पारीवन्तन हुनैपर्छ.. फेरी यहाँ अरुको चरित्रमा सन्का गर्ने र आक्षेप लगाउने नैतीकता नै कसको छ र? मेरो कुरा टिपेर राख्नुस् सब सरीफपना पाखन्ड हो
तपाईंले सय बर्षभन्दा पनि अघी एक रुशी साहित्यकार फ्योदोर दोस्तोएव्स्कीको 'क्राइम एन्ड पनिश्मेन्ट' पढनुभको छ ? त्यसमा नायक रादियोन रस्कोल्निखोवले एउटी यौनकर्मी को खुट्टामा झुकेर भन्छन- सारा मानवताको पिडालाई बोकेकोमा म तिमीप्रती नतमस्तक छु.. मलाई पनी बेलाबखत तेसै भन्न मन लाग्छ
एक दिन मलाई मैले ब्यक्तिगत रुपमा नचिनेको तर यो देशको सफल युवा महिलाले लेखिन- हावाजी यू आर डाम राइट फक टू दिस सोसाइटी.. तेसै त भनिनन होला उनले पनि
Labels: Feminist Movement in Nepal
नो पोलिटिक्स.. जस्ट फूटबल
के भाको होला यार अचेल त पुल्टिसको कुरै गर्न मन लाग्दैन भन्या..
समाचार पनि पढन मन लाग्दैन यार.. वाक्क लाग्छ
संबिधान सभा बिघटन भो ? ....खुच्चिङ
संबिधान सभा बिघटन भएकोमा सारा नेपालीलाई मेरो भन्नु एति मात्रै छ... खुच्चिङ.... जयन्त प्रसाद्को जुत्ता हेरेर बस । सायद तिमीहरु तेसकै लायक छौ ।
नैतिक दायित्वको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रपती बाहेक राजनिती गरिरहेका सबै सन्स्थाका प्रमुखहरुले आआफ्नो पद बाट राजिनामा गर्नुपर्छ । सबैभन्दा बढी जिम्मेवार तीन ठुला पार्टी र मधेसी मोर्चाका शिर्षस्थ भनाउदा नेताहरुले त राजिनामा मात्र हैन राजनीतिक जिवन बाटै सन्यास लिएर काशिवास गरे हुन्छ ।
तेतिमात्र हैन आदिबासि, जनजाति, मधेसि, बाहुन्, छेत्री, आदी सबै सँगठन प्रमुखहरुले सामुहिक राजिनामा दिनुपर्छ ।
Labels: Nepal Constitution Assembly
नेपालका भेंडा नेता र जनतालाई सम्बोधन
अचेल फेरि नेपालमा चहलपहल बढेको छ । यस पालीको जेठ १४ मा त साच्चै नै प्रलय नै आउला जस्तो गर्न थालेका छन् मानिसहरू । हिजै एक जना चर्चित मानवअधिकारीकर्मीले निकै गम्भीर भएको नाटक गर्दै भने – देश मास हिस्टेरियामा गईसक्यो । अर्काथरी, अग्रगमनका ठेकेदारकर्मीले भने – हैन, सबै जातजाति आफ्नो अधिकार बारे सचेत भएकोलाई त सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । ठेकेदारहरुको यस्तो कुरा सुनेर मलाई त हासो उठिहाल्यो ।
मलाई कसैको पनि सर्टिफिकेट नचाहिएकोले ढाँटनुपर्या पनि छैन – रमाईलो लागिराछ । बल्ल क्लाईमेक्समा आईपुगियो । अवस्था रोचक अनि सनसनीखेज हुदैछ । कम्तीमा दुई चार हजार त जेठ १४ कै सेरोफेरोमै शहीद होलान जस्तो छ, हाहाहा । फेरि, मलाई के को चासो, म मर्ने होईन क्यारे । बरू, यस्तो रोचक अवस्थामा मलाई पनि लेख्ने कुरा फुर्ने गर्छ ।
मलाई खासै चासो र फरक नपरेतापनि ताई न तुईको आफ्नो खाल्डो आफै खन्न थालेका भीडहरूको जमात देख्दा दया लागेर आउँछ, करूणावतार जो परियो आफू । तेसैले, म के भनिदिउँ र भेडा नेपालीहरूको अन्तःचक्षु खुलोस् भन्ने करूणा चलेर आउँछ ।
तेसो त अचेल म आफ्नो ब्रम्हज्ञानले पत्ता लगाएको कुरा जताततै बारम्बार दोहो¥याउने गर्छु – सब भ्रम हो भनेर । म के देखिराछु भने यी सबै मत्र्यलोकवासीहरू महाभ्रममा छन् । सबैलाई मै जान्नेसुन्ने, मै बाठो, मै चलाख, मै ज्ञानी, मै असल...अरू सब मूर्ख, खराब, तुच्छ आदि अर्थात् सबैलाई ‘मै हूँ’ भन्ने अहङ्कारको भ्रम छ । कतिसम्म भने आजकल मेरो गल्लीको एउटा भुस्याहा कुकुर पनि ‘मै हूँ यो विश्वकै सर्वेसर्वा भुस्याहा कुकुर’ भन्ने शैलीमा भुक्न थालेको छ ।
तेसैले, हे भेडा नेपालीहरू हो मेरो कुरा सुन् । तिमीहरू जो जेसुकै भएतापनि तिमीहरू भुसुनामात्र हौ । कसैले पनि धेर नखोके हुन्छ ।
यी त भए अन्तःज्ञानका कुरा । अब ठोस धरातलीय यथार्थमा फर्कौं । त्यै हो अब चाहि देश जातिय युद्धमा जाने निश्चितप्रायः छ भन्ने धेरैको आशङ्का देखिन्छ । त मपनि कुरा बुझौं के रैछ त मर्त्यलोकवासीहरूको हालखबर भनेर हिजो बन्दको दिन आफ्नो दरबारबाट फिल्ड भिजिटमा निस्कें । त म घुम्दैथिए, हालको कथित् ताम्लासिङतिर ।
एकजना अधबैंसे मानिस बाटो खन्दै रछन् । उनले मलाई बोलाए, बाबु आउनुस एकछिन् बसौं भनेर । मैले बुझिहाले, उनलाई पनि राजनीतिको हावा लागेको रैछ । अब नेपालीहरूको परिचय गर्ने शैली त थाहा नै छ सबैलाई । उनले मलाई सोधेको पहिलो प्रश्न थियो – बाबु के थरी ? मैले आप्mनो बाहुन थर भने । अनि मैले पनि उनलाई सोधें – तपाईं के थरी नि, दाई ? उनले भने – म तामाङ हो बाबु ।
अनि मैले भने – लौ त, तामाङ दाई, आफू त बाहुन परियो, तपाईंहरूको ताम्सालिङ क्षेत्रमा आईयाछ । उनले भने – तेसो हैन बाबु, हामी सबै नेपाली हौं, हामी सबैको रगत त उही हो नि बाबु ।
अनि उनले मलाई सोधे – बाबु, कतिको पढनुभाछ कोनि । मैले पनि नढाँटी सत्य कुरा भनिदिए – धेरै पढेको त छैन दाई, तर ठोकुवा नै गर्ने हो भने यो देशको जुनसुकै मै हूँ विद्वान भनेर घमण्ड गर्नेभन्दा कम पढेको पनि छैन । अनि उनले एउटा चुरोट सल्काए, मलाई पनि चुरोट खाउँ बाबु भने । मैले म चुरोट खान्न दाई भने । उनले भने – हामी त तामाङ हो बाबु । हातमा आगो छ, ढाँटनु हुँदैन, पढेलेखेको छैन ।
अनि उनले सोधे, मेरो कुरा ठाउँमा पुग्छ कि पुग्दैन बाबु ? मैले भने – के कुरा दाई, म पु¥याउने प्रयास गरूला । उनले भने – हेर्नुस, हामीले ज्ञानेन्द्रलाई पनि मानेकै थियौं । अहिलेका नेताहरूलाई पनि मानेकै हौं । तर, हेर्नुस् त, नेताहरूमा धर्म छैन । छोराछोरी, भाईभतिजा, छोरी ज्वाईं बनाउन लागे । देशको बारेमा कसैलाई चासो छैन । उनेरू ठुला मान्छे भाका छन् । हामी सधैं साना मान्छे नै भयौं । म बाटो खनेर महिनाको दश हजार कमाउँछु । जातैले पाको, जाँडरक्सी चुरोट पनि खानैप¥यो । मैले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन पाको छैन । हामी त जातै तातो रगत भाका । अनि हाम्लाई रिस उठ्दैन त ?
मैले भने, दाई तपाईलाई मात्रै हैन । म पनि बाहुन नै हो, तर मलाई तपाईलाई भन्दा पनि चर्को झोक चल्छ । औषधी खाएर आप्mनो झोकलाई कण्ट्रोल गर्छु । अब जेठ १४ आउँदैछ, त्यसपछि सबै छिनोफानो गर्नुपर्ला । अनि म हासें । अनि उनी पनि हासें । अनि मैले भने – हेर्नुस दाई, नेता ठुलो र तपाई सानो मान्छे हैन । पढनु लेख्नु मात्रै पनि ठुलो हैन । नेता हुनु पनि ठुलो हैन । सबैका आ-आफ्ना सीप हुन्छन् अनि सबैका आ-आफ्ना दुःख हुन्छन् । तपाईले बाटो कुलो नखने गाउँको कसरी विकास हुन्छ ? नेताले आएर त तपाईले जस्तो बाटो खन्न सक्दैनन । तेसैले तपाईंको ठाउँमा तपाई नै ठुलो मान्छे हो ।
मैले त्यति भन्नासाथ उनको अनुहारमा चमक आयो । उनी दङ्ग पर्दै भने – बास्, बाबु, बास्, हाम्ले भनेको पनि त्यति मात्रै हो । हाम्लाई हेला गरिदिनुभएन । बाबु त साच्चै नै धेरै जान्ने मान्छे पो रैछ । म पनि ती तामाङ दाईले आफूलाई पनि र मलाई पनि चिनेकोमा दङग परें ।
यी त भए जनस्तरका कुरा । चाहे जनजाति हुन वा बाहुन क्षेत्री वा मधेशी । म चाहिँ जनस्तरमा कुनै समस्या देख्दिन । समस्या भन्ने नै नेता, ठुला, अग्र(?)गामी, विद्वान आदि भनाउँदा मा देखिराको छु । र यस्ता तत्व सबै वर्ग, जाति र समूहमा छन् । बाहुन क्षेत्री नेता मात्रै धूर्त र जनजाति नेता कम धूर्त भन्ने पनि हैन । शायद, मान्छेको जातै घटिया हुन्छ जस्तो लाग्न थालेको मलाई अचेल । तेसैले मान्छे भन्दा पनि म पशुहरूलाई मन पराउँछु अचेल । आखिर पशुपतिनाथको मित्र जो परियो । यिनीहरूले आफू ठुलो बन्नका लागि जनतालाई जुधाईरहेका छन् । मलाई हासों त यिनको मै बाठो भन्ने शैलीमा लागेर आउँछ । आप्mनो खाडल आफैले खनिरहेका छन्, हा..हा..हा
तर, नेता अनि जनता भेडाहरूको जेसुकै भएतापनि यो देश नेपाललाई नै भड्खालोमा जान दिनु भएन । किनभने, यहाँ त म पनि बसेको छु । मेरो दरबार पनि यै देशभित्र छ । मलाई केही हुन्छ भनेर हैन । यो देशमा केही भएपनि मलाई केही फरक पर्दैन । दिनको १० घण्टा सुत्ने बानी छ मेरो, जुनसकै अवस्थामा पनि त्यो कायम रहनेछ । म बिहान नेवारले पकाएको खाजा खान्छु, खाना मगरले पकाएको खान्छु, अनि बेलुकाको खाना एकजना लिम्बुनी दिदीले पकाएको खान्छु । गर्मीको मौसम छ, अचेल तरबूजा अनि चटपटे एकजना मधेशी दाईले बनाएको मिठो लाग्छ मलाई । अघि भर्खर भारतको गोरखपुरबाट काठमाडौंमा मिठाई पसल खोलेका साहुजीकोमा चाउमिन खाँए । त्यसपछि, एउटी तामाङ्नी दिदीकोमा हरियो नून खुर्सानी दलेको काक्रों खाँदा बडो आनन्द आयो । म तिमेरू नाक चुच्चे र नाक थेप्चे दुवैथरीका छुसी नेताहरूको कुनै पनि गेमप्लानलाई किमार्थ सफल हुन दिने छैन । त्यसैले, देशलाई बचाउने मेरो आगामी योजना पनि सुनाउँछु । अनि अलिकता खरो कुरा पनि गर्छु अब ।
हे भेडाहरू हो, सबैभन्दा पहिले तिमीहरू के प्रष्ट होऊ भने यो देश नेपाल हो । त्यसैले जसले आफ्नोपहिलो पहिचान नेपाली भनेर प्रस्तुत गर्छ, उसले मात्र अरू अधिकारको दावी गर्न पाउनेछ । अनि अधिकारको दावी गर्नुभन्दा पहिले तिमीहरूले यो देखाउनुपर्नेछ कि यो देशको लागि तिमेर्ले योगदान के दियौ ? छोराछोरी त मेरो गल्लीको भुस्याहा कुकुरले पनि पालेको छ, तिर्मेले त्यस्तो विशेष के नापेका छौ ?
अझ सुन, यो देशमा बस्ने अनि आफूलाई नेपाली भन्ने जति सबै यहाँका आदिवासी हुन् । कुनै खास जाति विशेष मात्र आदिवासी होईनन् । आफूलाई नेपाली भन्दा पनि पहिला मङ्गोलियन अनि अनेक थरी नामले चिनाउनेहरू हो, तिमीहरू चीनभन्दा पनि परको देश मङ्गोलिया जाओ । त्यै हो मङ्गोलियनहरूको आदिवासी देश । आफूलाई नेपाली भन्दा पनि मधेशी पहिचान खोज्नेहरू, तिमीहरू भारत फर्क । अझ, भारतको पनि युपी, बिहार मात्र जानु, अरूतिर त भारतमै पनि तिमेर्को खैर छैन । युपी, बिहारमा पनि तिमेरू त्यहाँको कुनै जातिय नेताको गुलामी गर्नु । बाहुन क्षेत्री हो, तिमेरूले पनि सङ्घीयता चाहिदैन भनेर नखोके हुन्छ । देश सङ्घीयतामा गईसक्यो, कस्तो सङ्घीयता भन्ने मात्र प्रश्न हो । जुनसुकै क्षेत्र वा जातिका भएपनि दलितहरू प्रति भने मेरो विशेष सहानूभूति छ ।
जेठ १४ र त्यसको सेरोफेरोमा देशको पहिचान र अमनचैनका लागि जुनसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहन म वर्तमान राष्ट्रपति रामबरण यादव र नेपाली सेनालाई सजग रहन आदेश दिन्छु । यो राष्ट्रपति रामबरण मधेशी नै भएतापनि यो नै अहिलेको सच्चा नेपाली नेता हो भन्ने मेरो ठहर छ । त्यसैले, बरू आवश्यक परे संसद, सम्बिधान सभा, सरकार लगायत सम्पूर्ण निकायलाई खारेज गरी रामबरणको मातहतमा सैनिक शासन लागू गर्ने म आदेश जारी गर्दछु । बरू, प्रधानमन्त्री चाँहि कुनै चिम्से आँखा अनि थेप्चो नाक भएकालाई बनाउनु, सजिलो हुनेछ ।
Labels: Nepal Development Process, Nepal President Ram Baran Yadav, Political and Social Corruption in Nepal
लौ अब बाहुनहरूको पनि नेपाल बन्द
हाहाहा...आजको नेपाल बन्दमा म खुशी छु
जनजाति, मधेशी, आदि लगायत विगतमा शासन पद्धतिमा अलिक पछाडि परेकालाई शासन प्रक्रियामा अगाडि आउन दिनुपर्छ भन्नेमा म बाहुन आफू पछाडि बसेरै भएपनि समर्थन गरेकै हो
तर, जनजाति, मधेशी आदि भनाउँदाहरूले के बिर्से भने उनीहरू शासन प्रक्रियामा मात्र बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी भन्दा अलिकता पछाडि परेका थिए, अरू कुरामा होईन
कतिसम्म भने धुर्त्याइमा पनि उनीहरूकै नेतापनि बाहुन भन्दा कम छैनन भन्ने कुरा अहिले आएर उनीहरूकै नेताहरूले पनि प्रमाणित गरिसके
धूर्त बाहुन नेताहरूलाई गाली गरून्जेल त ठिकै थियो, तर कतिसम्म भने फेसबुकमा के सम्म देखे भने बाहुनलाई काट्नुपर्छ अरे
यिनीहरूलाई त देखाउनै पर्ने थियो कि परिआएको खण्डमा बाहुनको बीर्य धुर्त्याइमा मात्र होईन, शूरो पनि हुनसक्छ
त्यसैले आज नेपाल बन्दमा निस्केका जड्याँहा बाहुनहरूको हुल देखेर म जस्तो बाहुन ब्याशरलाई पनि रमाईलो पो लागेर आयो गाँठे
कहिलेकाहिं त त्यो राम्चन्द्रे बाहुनले भनेको पनि ठिकै हो जस्तो लाग्छ यार
गृहयुद्ध नै लडनुपरे पनि लडौंला
स्याब्बास बाहुन हो
बल्ल तिमेर्ले मेरो चुच्चो नाकको ईज्जत राख्यौ
Labels: Bahunbad in Nepal, Nepal Ethnic Conflicts